हेलम्बुमा बेगिएको मन - sailungonline
३ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०७:०० ।
सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रयोग भएकै थिएन- क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, कन्ट्याक्ट ट्रेस, लकडाउन, सोसल डिस्टेन्सजस्ता शब्द । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली जनजिब्रोले टिपेकै थिएन भन्दा पनि हुन्छ यी अभोग शब्दहरू । कोरोनाबारे अनेकन् अनिश्चितता, अन्योल र अफवाह त छँदै थिए, राजधानी पनि धेरथोर गर्माएको थियो हल्लाहरूले । कानै टट्टाउने गरी लगातार चिच्याउँदै थिए शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल– ‘हेल्थ डेस्क राखेरै किन नहोस् सम्पन्न गरिन्छ एसईई ।’ उनको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो-मन्त्रीजी आफ्नो जिम्मवारीप्रति कटिबद्ध छन् ।
२०७६ चैत्र ५ गतेसम्म सामान्य जनजीवनमा आनको तान बदलाव आउने कल्पना गरेका थिएनन् कसैले । भोलिपल्टै आरम्भ हुँदै थियो- विद्यार्थीहरूको ‘फलामे ढोका’ भनिने एसईई परीक्षा । अनयासै (५ गते अपराह्न) परीक्षा स्थगन भएको खबर सुनियो । दुई तिहाइको सरकारको दूरदर्शीता राम्रैसित उदाङ्गियो, परीक्षा स्थगनको घोषणाले ।
परीक्षामा हुने नै भएपनि आफ्नो उल्लेख्य भूमिका नभएकै कारण हल्लैहल्लाको शहर छाडेर एकैरात किन नहोस् टाढिने निष्कर्षमा पुगेको थिएँ म ।
नियात्राकार राजेन्द्रमान डंगोलले पहिले नै यात्राको गन्तव्य जुराइसकेका रहेछन्– हेलम्बुको तार्केघ्याङ । ट्रेकिङ व्यवसायी भएकोले उनको कर्मक्षेत्र पनि हो– हेलम्बु । एकातिर हेलम्बुसित गाँसेको सम्बन्ध नविकरण गर्ने र अर्कोतिर नयाँ सहयात्रीसँग रमाइलो विचरण गर्न पनि सकिने । हेलम्बुको चिरपरिचित मनहरूमा मायाको जलप लगाउन चाहन्थे सायद उनी । ‘पशुपतिको जात्रा सिद्राको ब्यापार’ गर्दै थिए उनी ।
मैले विरलै सुनेको नाम थियो- हेलम्बु । लाग्यो- पाहुनाको निहुँ, आफूलाई पनि घिउ । विनाकुनै थप तर्क नगरी स्विकारेँ उनको घुमफिर प्रस्ताव ।
चारजनाको टोली हाम्रो । काठमाडौँबाट प्रस्थान गरेको आधा घण्टामै पुगिसकेका थियौँ सुन्दरीजलको बराहचोक । सही सूचनाको अभावमा तिनचोटी त बराहचोककै फेरो मारिरह्यौँ । बाटोले हामीलाई चिनेको हो कि हामीले बाटो चिनेको हो । मुलखर्क पुगेपछि थाहा भयो, हामीले समातेको बाटो सही रहेछ । अहिले सम्झदा पनि हाँसो लाग्छ । ‘एकछिन आराम दिउँ न त बाइकलाई !’ चालक राजेन्द्रमानले रोकिए । बहानामा चिया पिउने । विश्राम पनि हुने, चियापान पनि हुने । एक पन्थ दो काज !
घना जङ्गलभित्र उकेरा लगाएको कच्ची सडकमार्गमा गुडिरहेका थियौँ हामी । १,३५० देखि २,७३२ मिटर उचाइमा अवस्थित राजधानी नजिकको एउटैमात्र निकुञ्ज– शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज । २०५८ सालमा स्थापित १४४ वर्ग किलोमिटरमा विस्तारित शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज २०६५ सालमा १५ किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको नागार्जुन क्षेत्र पनि गाभिएपछि शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रूपान्तरित भएको थियो । उतिस, चिलाउने, काफल, खर्सु, मुसुरेकटुस र रानीसल्लाले निरन्तर चियाइरहे हामीलाई । सलक्क परेका सल्लाका वृक्षहरूले सलाम गरिरहेझैं भान हुन्यो । किञ्चित झुकेर स्वागत गरथे हाम्रो आगमनलाई, मेललगायतका फक्रदा श्वेत सुमनहरूले ।
एकनासले गुडेका भटभटेमा उकालिँदै जाँदा पुड्का देखिँदैछन्, क्षितिज छोएका अग्लाअग्ला गिरि, थुम र टाकुरा । अल्पिँदैछ कोरोनाले काफरे बनेको कान्तिपुर खाल्डो । जीवनको सुरम्य घुम्तीमा पुगेका छौँ हामी, घमाइलो घुमफिरको दर्मियानमा । क्षितिज चुम्दैछ घाम र सुनौला बन्दैछन् सौर्यरश्मि । कहालीलाग्दो कोलाहलबाट टाढिँदैछौं हामी चार थान उन्मुक्त यायावर । न नपुगी नहुने गन्तव्य, न पुग्नैपर्ने भूगोल । उठ् जोगी फड्कार छाला, जता जाला भातै खाला भनेझैँ ! अस्पष्ट कुहूकुहू सुनिन्छ नेपथ्यतिर यदाकदा । एकाध भटभटे र चार पाङ्ग्रे गुडिरहेको उच्चाटिलो आवाज र तिनले उत्पन्न गरेको कुहिरीमण्डलको धुवाँको रजाइँ छ धुलेमार्गमा ।
त्यसो त यात्राको पृथक वैविध्य छ– पंक्षीप्रेमी जयनाथ हुन् वा रङ्गकर्मी पुरु या उम्दा नियात्राकार राजेन्द्रमान । पृथक सामर्थ्य छन् सबैका, त्यो पनि प्रचुर मात्रामा ।
राजेन्द्रमानले चोरीऔँलो तेर्स्याएर भने– ‘उः त्यो झुले, यही बाटो गरी पुगिन्छ नगरकोट । भोली मेसो मिलेछ भने हामी जाने ।’ पर्यटन व्यवसायमा दशकौं खर्चेका उनले पाइला नराखेका भूगोल कमै छन् ।
‘चिमाल पो रहेछ त ?’ अर्धमुदित सेता सुमन इङ्गित गर्दै सोधेँ मैले । ‘यो चिमाल नै चाहिँ होइन, ठ्याक्कै चिमालजस्तै भने हो । चिमालको वन नै हेरौँला, धैर्य त गर्नुस् !’ राजेन्द्रमानको सटीक जवाफ । मेरो उत्सुकताले धैर्यताको बाँध नै टुटिसकेको छनक दिन्थ्यो उनलाई सायद । किञ्चित लज्जाबोध भएथ्यो मलाई तत्क्षण ।
चन्द्रागिरीको चुचुरो ताकेर घिस्रिरहेको घाम एक निमेष टक्क अडिएको आभास भयो झुले झर्ने देउरालीको त्यो दोबाटोमा । उनीसँग गफिँदागफिँदै ओझेलिसकेछ उपत्यका । गोचर भयो चिसापानी ।
काँधमा हिउँको भारी बोकेर चिसापानी अवलोकन गरिरहेका लाङ्टाङ र दोर्जेलाक्पाले पनि देख्यो हामीलाई । सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटको साझा चौतारी हो– चिसापानी । महाभूकम्पको पाँचौं वर्षमा पनि रतिभर तंग्रन नसकेको राजधानीको पूर्वोत्तर माथ । आलै छन्, त्यहाँ पिलिएका चोटहरू । खाटा बस्न र खतमात्र देखिन त दर्जनौं शरद कुर्नुपर्ने आँकलन गरियो । कङ्काल भग्न अवशेषहरु यत्रतत्र छिरोलिएका छन्, दर्दनाक अवस्थामा मानौँ भर्खरै तहसनहस बनेका हुन् यी संरचनाहरु ।
दुई चार थान तस्वीर लिएर बाटो तताउने जमर्को गर्दैगर्दा एक वृद्धा होटलवाल्नी हामीलाई त्यतै बास बसाउन यथेष्ट प्रयत्न गर्छिन् । हठात् याद आउँछन् निकट अतितमा भुक्तभोगी मित्रहरूको शिकायत मेरो दिलदिमागमा । फिरङ्गीहरूको राइँदाँंइ चल्ने र आन्तरिक पाहुनालाई फुटेको आँखाले हेर्न नरूचाउने स्थानीय व्यवसायीहरूको ढोनेसो पनि कोरोनाले लट्ठीले पिटिक्कै भाँचेछ । लाग्यो, दर्दैदर्दको उरूङमा दारुण यात्रा गर्न विवश छन्। अचेल यहाँका व्यवसायीहरू । दृश्यले भरङ्गियो मन तत्क्षण ।
न सवारीको अधिक चाप, न कल्पेझैं ज्यास्ती छारो । बेहिसाब धर्सैधर्सा धराको छातीमा । अनगिन्ती दोबाटा र चौरस्ताले नौला फिरन्तेलाई फिक्रीमात्र, भलै वासन्ती
भलै वासन्ती कान्तिको आभा फिँजाइरहेका किन नहुन् निकुञ्जभरि सौरभित सुमनहरू । अचानक याद आउँछ बालवयमा गाइएको लोरी–
हेर्छु वरपर, सलक्क परेका सल्लाका वृक्षहरू । लाग्छ, सलाम गरिरहेका छन्, यसो झुकेर यिनले हामीजस्तै यायावरलाई । जयनाथको भटभटे हँकाइ हेर्दा झ्वाट्ट स्मृतिचित्रमा आउँछ गायक उदित नारायणको गीत–
यो केटा के भा’को…..’
बेगिन्ती उबडखाबड, पच्याङ छिचोल्दै र ठाउँठाउँमा बाटो बिराउँदै पुगियो, १,७४६ मिटर उचाईमा अवस्थित पाटीभञ्ज्याङ । निकै नै अर्ना्लिएकाले योजना बन्छ अर्नीको । चाउचाउ उमाल्न अनुरोध गरिन्छ स्थानीय भट्टी पसल्नीलाई ।
सन्नाटा चिर्ने मेलोस्वरूप पुरु माग्छन् उनको परिचय । मन्द मुस्कान छर्दै परिचय दिन्छिन् साहुनी- ‘उमा श्रेष्ठ ।’ ‘लवाइ र लवज त्यस्तो लाग्दैन त ।’ आशङ्का व्यक्त पुरुले । ‘माइती थपलिया हो नि त ।’ खुलेरै भन्छिन् उनी । बल्ल सन्तुष्ट भयौं हामी उनको लवज र लवाइको तादात्म्यले ।
कुरैकुरामा बुत्तिइसकेछ तीन पोका चाउचाउ चारजना फिरन्तेद्वारा । अर्नीपश्चात् हामीले सोध्यौँ साहुनीलाई बाटो । उनले भनिन्– ‘बायाँ जाने सडक कुटुमसाङ जान्छ र लाग्छ एक डेढ घण्टा ।’ दुई तीन किलोमिटर उबडखाबड चट्टानीमार्ग उक्लेपछि एक स्थानीयले भन्छन् ‘डेढ दुई घण्टा लाग्छ ।’ भरोसालाग्दो सूचना पाउन सकिएन ।
त्यही दिन तार्केघ्याङ जाने भन्ने योजना तुहिएपछि भटभटे बत्तियो ओरालोतिर फेरि उही पाटीभञ्ज्याङकै ढाड टेकेर । त्यसो त उकालिन अस्वीकार गर्दै थियो भटभटेले पनि । ओरालिँदै गर्दा नजरमा आए प्रकृतिको सप्तरङ्गी संरचना । ओसिलो आवहबा, मलिला चौंडिला सुर्काहरूमा मल्किएको गहुँ र आलु । छरपष्ट बस्ती, ऐक्यबद्ध चेत । होचिएका घर, अग्लिएका श्रमजीवी कद ।
धर्कैधर्का धुले सडकका । भटभटेले उडाएकै धुलोसित लुकामारी खेल्ने सौभाग्य पायौँ हामीले । आँकलन गर्न हम्मे थिएन स्थानीय तहको नेता र ठेकेदारहरूको कार्यशैली । आम्मै ! धुले सडक जत्तिको ध्यानुगाई कहाँ पाउनु उनीहरूले ! यो वर्ष डोजर चलायो । अर्को वर्ष पैरो सफा गर्यो । अझ अर्को वर्ष कुलेसा निर्माण भन्यो । झन् अर्को वर्ष मर्मत र ग्राभलिङ । फेरि अर्को निर्वाचनमा आफूले थालनी गरेका योजना थला नपरून् भनेर टिकटमा दलाली र नोटका बिटाले उपल्लो स्तरका नेताको थुतुनो चड्काएपछि प्रत्याशी पक्का । यसो दारुपानी र सितनलाई हप्ता दिन जति चलाइदिएपछि विजयमाला पनि पक्काजस्तै ! आखिर देखिएकै कुरा त हो यो ! यस्तैयस्तै कुराहरू रिँगारपाटो लागिरहेको थियो मेरो मथिंलमा ।
सडकको दायाँ र बायाँ मल्किएको रबीबाली देखेपछि हठात् खप्परमा हान्यो– ‘पसिना शक्ति हो, महाधन हो । कल्पनाले मात्र हुन्न गर्नैपर्छ परिश्रम’ भन्ने स्पेन्सरको कथनले । पहाडहरू मेरै भाइहरूझैं लाग्छ भन्ने महाकवि देवकोटालाई त नसम्झने कुरै भएन । भान भयो– प्रकृतिको पुस्तक ग्यालिलियोले भनेझैँ गणितीय भाषामा लेखिएको हुँदोरहेछ । हिसाब भन्नासाथ भयको पिसाब आउनेले त्यो भाषा के गरी बुझ्नू ! चक्करायो दिमाग एक क्षण ।
पिप्ले पुग्नुअगावै मुल्किएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको एक द्वार । मेलम्ची खानेपानी आयोजना काकाकुल राजधानीको घाँटी भिजाउने लामो अवधिसम्म देखेको तर ऐंठनमा रूपान्तरित हुँदै गरेको साझा सपना । इटालेली ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दी रेभेनाले छरपष्ट पारेको सपना । जब अम्बाथान, ग्यालथुम र सिन्धुको कुल १४ किमि सुरूङको बाँकी कामलाई मझधारमा बेवारिसे पारेर सुइँकुच्चा ठोक्यो सीएमसी तब त्यो सिनोसरि काम सम्हाल्ने कसम खायो सिनो हाइड्रोले । एक स्थानीयले निर्माणस्थलमै जानकारी गराए– ‘दुई महिनामा सकिन्छ सुरुङमार्गको बाँकी अंश ।’ जवाफले भरमार आशावादी बनायो हामीलाई । दुई चार थान तस्वीर लिएर बाटो तताउने जमर्को गर्यौं ।
निमेषभरमै पुगिएछ पिप्ले, धुलोमा बाँकटे हान्दै । राजेन्द्रमान र जयनाथको तिर्खाएको भटभटेलाई पेट्रोलको पिलाउनु थियोे । कुरीकुरी लाग्ने किसिमको थियो, बोत्तलमा भरेर राखिएको मूल्य । बाध्यता भएपछि किन्नै पर्दोरहेछ । एकाएक अलप हुन्छन् उपभोग्य बस्तुहरू नाकाबन्दी वा बन्दाबन्दीको सुइँको पाउँदा । त्यसपछि त व्यापारीहरूको एकाधिकार सुरु भइगो । यसबारे ओठ सिलाएर बस्छ सम्बन्धित निकाय । तैँ चुप मै चुप यत्रतत्र । देशै चलाउने सारथि त यस्तो वितण्डाबाट दूर हुन सकेनन् भने सेतो बजार कालाम्मे बन्नु त के अनर्थ भयो र ?
परिभ्रमणको ऊर्जालाई चितामा पुर्याउँथ्यो चिन्ताले । ‘मनमा शोक, जिउमा रोग’ त सर्वथा अनुचित कुरा हो । ओरालो लाग्नुपर्ने नै थियो, लागिरहेका थियौँ । बातचितमा बितेको समय थाहै भएन । नजिकै आयो जगमग्ग क्षेत्र । अड्कल काटे राजेन्द्रमानले– त्यही हुनुपर्छ मेलम्ची । अँध्यारोको साम्राज्यले जिप्ट्याएछ उनलाई । बाहुनेपाटी पो रहेछ ! फिस्स हाँस्दै बोलें म ।
‘साढे चार किलोमिटर मात्रै हो यहाँबाट ।’ सडक छेउ उभिएका एक स्थानीयले देब्रेतर्फ देखाएर भने । आभार प्रकट गरेँ मैले । नभन्दै सही सावित भए उनी हाम्रो नजरमा ।
‘बाइरोडको बाटोमा धूलो उडाउँदै …….’ भन्ने गीत स्मृति चित्रमा सजाउँदा सजाउँदै देखिए मेलम्ची लेखिएका रङ्गीबिरङ्गी बोर्डहरू ।
नजरमा झ्याप्पै पर्यो होटल पाँचपोखरी । पौराणिक कालमा विश्वामित्र ऋृषिको तपोवन हो पाँचपोखरी । भैरव, सरस्वती, गणेश, सूर्य र नागकुण्ड गरी पाँच वटा कुण्डहरूको सामूहिक पहिचान हो पाँचपोखरी । ४,६०६ मिटर उचाइमा अवस्थित पाँचपोखरीको परिक्रमा गरे पापमोचन हुने र चिताएको कुरा पुग्ने जनविश्वास पनि अद्यापि छँदैछ । यही गौर प्रभावका कारण मैले उही होटलमा बस्न प्रस्ताव राखेँ । विमति जनाएनन् कसैले ।
पसियो गेटबाट र हेरियो रात छिचोल्ने बसाइँ । स्वभाविक मोलतोल भयो कोठाको । साहुनीको मुन्टोको हाउभाउ देख्दा हाम्रो प्रस्ताव स्वीकारेझैँ लागेको थियो । त्यो त उनको ग्राहक नउम्काउने काइदा पो रहेछ ! बिहान बिल तिर्दा पो थाहा पाइयो कोठाको भाउ । ब्यापार गर्न चाहिँ जानेका ! मानेँ मैले ।
गर्मीले हरक आइसकेको माछाको पनि सात सय रुपैयाँ ? झण्डै सात्तो गएन हाम्रो । उनै पशुपति शर्मालाई सम्झिनुको विकल्प थिएन हामीसँग लुटिएको अनुभूति शमन गर्न ।
बसपार्क छेउको होटल । बास्न थालिसकेका थिए बसहरू बिहानदेखि नै । त्यो कर्कश ध्वनिले प्रदूषित बनाइरहेको थियो मेलम्ची बजारलाई । थप बसाइँ लम्बिनु भनेको ज्यानलाई थप थिलथिलो बन्नु थियो । यही निचोडका साथ सुरू भयो दोस्रो दिनको यात्रा ।
विचरणको प्रारम्भमै भेटिए गिरी थरका एक स्थानीय । पाल्चोक भगवतीको दर्शन छुटाउन नहुने भनी सुझाए उनले । उनको सल्लाह शिरोपर गर्यौँ हामीले । मेलम्ची र इन्द्रावतीको दोभानमा निर्मित पुल तरी उकालिइयौँ हामी । युद्धस्तरमा निर्माण हुँदै गरेको सडक उकालिँदै गर्दा गोचर भए मनमोहक दृश्यहरू यत्रतत्र । हरिया रबी बालीका तरेली, पातला बस्ती, आकर्षक आबहवा । लोभ्यायो मन यी वैशिष्ट्यले ।
हरियाली पाखा पखेराहरूको दृश्य आस्वादन गर्दागर्दै दुवाचौर पो पुगिएछ । अर्का दुई थान सहयात्रीको प्रतीक्षा गर्न र समाजको सूचना सङ्कलन पनि गर्न विश्राम उत्कृष्ट अवसर भएथ्यो त्यो बेला । आशाको सञ्चार गरे हामीलाई फलफूल, बालीनाली र पशुपालनमा रमाएका स्थानीयले । उनीहरूका खुसीको तरङ्गमा तरङ्गिएथ्यौँ हामी पनि ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बासबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने सम्भाव्यता बोकेको छ दुवाचौरले । मनमा लागिरहेको थियो– पर्यटकीय गन्तव्य बनेपछि यहाँका होटल पनि मेलम्ची बजारकै होटल पाँचपोखरीजस्तै हुने त हो नि !
दुई भटभटेमा आरूढ चार फिरन्ते अघि बढ्यौँ दुवाचौरबाट पाल्चोक भेट्न । पहिलो पटक सुनेको पाल्चोक भगवतीबारे जान्ने हुटहुटीका साथ देवल परिसर पुगेका हामीले भेटिहाल्यौं कर्णबहादुर खड्कालाई ।
बढारिराखेको खरेटो फुत्त फ्याँकेर बेलीविस्तार लगाउन थाले उनले- ‘जङ्गल बिराउने क्रममा पोथ्रापोथ्री छिमल्दै गर्दा एउटा रुखको जराबाट दूध र त्यहीँनिरको अर्कोबाट ह्वालह्वाल रगत निस्कन थालेपछि स्तब्ध भए जिजुहरू । लख काटे यो त ईश्वरीय शक्तिको करामत हो । उतिबेलै वरपरका बासिन्दा मूलतः तामाङ, बाहुन, क्षेत्री, गिरी, पुरी आदि एकट्ठा भए । बृहत् छलफल र बहसपश्चात् तामाङले राँगो काट्ने, खड्काले बाँकी पशुपक्षी मार हान्ने, गिरीले पूजाआजा गर्ने भन्ने तय भएछ । त्यतिमात्र होइन, खड्काले नौ दिनसम्म एकै ठाउँमा लम्पसार उत्तानो परी सुतेर छातीमा जमरा उमार्ने जिम्मेवारी लिए । बडादशैंको नवमीको दिनमा विशाल मेला लाग्न पनि सुरू भयो ।’
उनले अगाडि थपे- ‘गुठी पूर्णिमाको दिन प्रत्येक गुठियारलाई कटुवाल कराएरै निम्ता गर्ने र भतेर खुवाउने प्रचलन छ यहाँ ।’
खुसी लाग्यो रितिपरम्पराको निरन्तरता सुन्न पाउँदा । उनले अनेक कालखण्डमा मन्दिरमा भएको हालीमुहाली र ब्रह्मलुटका किस्सा सुनाउन भ्याए । उनले शक्तिपीठको पीडा बकिरहँदा भने निर्लज्ज मनोमानी, नातावाद र कृपावादले खोक्र्याएको देशको सग्लो मानचित्र मेरोसामु खडा भइरहेको थियो ।
पाल्चोक भगवतीको देवलमा आइपुग्दा जिल्लाको नामकरणबारे चासो नदिनु न्यायोचित लागेन । कुरा के रहेछ भने यो जिल्लाको भू–भागभित्र आठवटा थुम (चौतारा, तौथली, नवलपुर, पाल्चोक, फुल्पिङ्कोट, लिस्ती, सिन्धु र सिपा) मध्ये सिन्धु र पाल्चोक थुमको संयुक्त नामबाट सिन्धुपाल्चोक रहन गयो भन्ने भारी मत तथा सिन्धुखोला र पाल्चोक भगवतीको नामबाट जिल्लाको नामकरण भयो भन्ने झिनो मत भेटियो । किन्तु दुवै खाले मत उत्तिकै दमदार लागे ।
विपुल प्राकृतिक सुन्दरता, सैलुङ र खर्कहरूको मितेरी, लाङ्टाङ र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको आधारभूमि साथै गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको तृणभूमि । दोर्जेलाक्पा, लाङ्पोघ्याङ, ग्याल्जेन र लेडिज पीकजस्ता विख्यात हिमशैलहरू । सिन्धु, मेलम्ची, बलेफी, इन्द्रावती, भोटेकोशी, सुनकोशीजस्ता अविरल नदीहरूको सिञ्चन । यस्तै यस्तै विविधताले भरिपूर्ण जिल्ला ।
उदरमा दौडिरहेका मुसालाई नजिकैको चमेनागृहको प्रसाद अर्पण गरि हानियौँ सेर्माथाङलाई गन्तव्य बनाएर । बाटो भन्न कुरीकुरी लाग्ने बाटोमा चिप्लिरहेछौं भटभटेको कान निमोठ्दै । माहिर छन्, राजेन्द्रमान यस्तो कुरामा जति सिद्धहस्त छन् नियात्रा लेखनीमा । ककनीको सरहदभित्र सर्वनाश पारिएको छ वनबुट्यान । न प्रशासन उपस्थित छ त्यहाँ न स्थानीय तह नै । दरबार बनाउने धुनमा अलमस्त त छैनन् गाउँका लोकल सिंहहरू ? अचानक आशङ्का उब्ज्यो मनको अन्तरकुन्तरमा । बेहिसाब छन् यसखाले परिघटना ।
निकै सतर्कतापूर्वक परिचय गराए राजेन्द्रमानले ककनी भञ्ज्याङ । स-सानो हरित शिखरको माथ । सानै किन नहोस् संगति मिलेको बस्ती । नजिकै लुङ्ता र लुङ्दरहरूको उन्मुक्त नृत्य र बेलगाम फरफराहट । सगरको सेक मुन्तिरको मनोहर टाकुरो । ककनी जहाँसुकै किन नहुन् यस्तै सुन्दरताका विम्ब हुँदारहेछन् भन्ने सटीक दृष्टान्त । प्रकृतिका कोटिकोटि भाषा हुनाले सम्वाद गर्न सकस हुँदै गर्दा नेपथ्यतिर सुनिन्थ्यो पन्छीहरूको कुहूकुहू र काफल पाक्यो…..! अर्थात् प्रकृतिको दुर्लभ भाषा ।
उता सगरको काखमा लुकामारी गरिरहेछन् बादलका केही लाप्साहरू । कहिले धरामा ओझेल पार्छन् त कहिले निराकार रूप धारण गर्छन् । अनि विलुप्त हुन्छन् क्षणभरमै । यात्राको लय र प्रकृतिको तान मिलाउने लेठो पनि गरेका छैनौं । ‘सुस्तरी अघि बढ्नू तर नसुस्ताउनू जथाभावी’ झन्कृत भइरहेछ पाको पुस्ताको अर्ती । यही बान्की पक्रँदै गर्दा डाँडाको टाकुरामा टुसुक्क बसेको प्रतिमा गोचर भयो । हतपत राजेन्द्रजीले भनिहाले– ‘पद्मसम्भवको प्रतिमा हो यो ।’ उनले गरेको पद्मसम्भवबारेको जनश्रुती भने पक्रन सकेन मेरो बोधो खप्परले ।
अलिक पर जंगलको मुन्तिर गजधुम्म थियो भूकम्पले छाती दारेको मन्त्रमुग्ध पार्ने साङाग छ्योलिड गुम्बा । रंगहरूको बेजोड तालमेल । कलाको अनुपम नमुना । रङ्गीबिरङ्गी लुङ्ता र लुङ्दरहरूको स्वच्छन्द फरफराहट । न कुनै छेकोभाँजो न कुनै संकोच । एक स्थानीयका अनुसार उद्घाटन गरिएको दुई साताभित्रै अर्ध–खण्डहरमा रूपान्तरित भयो त्यो फिरन्तेसमेत मोहित पार्ने अमूल्य धार्मिक सम्पदा ।
कुरैकुरामा समय चिप्लेको पत्तै भएन । ‘आलस्य जीवित व्यक्तिका निम्ति मृत्युसमान हो’ भन्ने टेलरको भनाइ याद आयो अकस्मात । जर्याकजुरुक उठेर हिँड्यो चार थान यायावरको टोली । गन्तव्य थियो सेर्माथाङ । ‘छेर्मान्थाङ’ अर्थात् स्थानीय भाषामा ‘काँडाघारी’ । शीत ओडेको चक्रेटो, सौर्यरश्मि पोतिएको सेर्माथाङको शिर । मोहनीमन्त्र भएकी बहुरानीझैं । उही बादलमा वज्र, उही बादलमा बिजुली भनेझैँ अभावको भूगोल उही, आकर्षक सम्पदाको खानी पनि उही ।
सेर्माथाङ पुग्नासाथ हाम्रा नजर सबैभन्दा पहिले निर्माणाधीन विशालकाय पर्खालमा पर्यो । स्थानीय फुर्बा लामाले यो हिमालयन सम्पदा मार्गलाई नेपाली ग्रेटवालको संज्ञा दिए । त्यसपछि फनफनी घुम्यो मस्तिष्कमा ग्रेटवालको सपाट संरचना । चू राज्यका राजा चङले निर्माण सुरू गरेको ग्रेटवालका अनेकानेक किस्सा छन् । पचासौं लाख कर्मवीरहरूको रगत पसिना बगेको ग्रेटवाल लियाउनिङ प्रान्तको यालु नदीको किनारबाट सुरू भई गान्सु प्रान्तको जियाउग्वानमा टुङ्गिएको छ । भत्केको भाग कटाउँदा यसको कुल लम्बाइ ६,३५० किलोमिटर रहेको छ । नेपाली ग्रेटवालको किस्सा भने किञ्चित भिन्न छ । जम्माजम्मी ६० किलोमिटर लामो निर्माणाधीन विशालकाय पर्खाल बुद्ध पार्कबाट अघि बढी पाकेडाँडा, ठाडेपाटी, घ्योछाडी, सेमीसिदाङ, पेम्थाङ, ढुम्चु, आमायाङ्ग्री, ज्योमोथाङ, सेर्माथाङ, नागीडाँडालाई समेटेर घोप्टेघ्याङमा टुङ्गिनेछ ।
यो पदमार्ग पर्खालको न्यूनतम उचाइ २,४०० मि. रहनेछ भने ५,००० मि. भन्दा बढी हुनेछ अधिकतम उचाइ । नुवाकोट र रसुवा जिल्लालाई समेत समेटेको पर्खाल स्लेट ढुङ्गा प्रयोग गरी बनाइएको रहेछ । हरेक खण्डमा दसवटा खुड्किला हुने पदमार्गमा पर्यटक बिसौनी र रातको समयमा सौर्य ऊर्जाको उज्यालो हुनेछ । एक किसिमको कथाझैं लाग्ने महत्वाकांक्षी यो योजना गाउँपालिकाको अग्रसरतामा शुभारम्भ भएको हो ।
मखलेल भयौं हामी पर्खालबारे सुसूचित हुन पाउँदा । चढ्न जतिसुकै सकसपूर्ण किन नहोस् चुली हेर्न मोहनीय हुन्छ भन्ने भान पनि भयो ।
यतिबेला हामी हेलम्बु क्षेत्रको मुटुमा छौं । स्थानीय भाषामा ‘हे’ भनेको आलु र ‘लम्बु’ भनेको मुला । आलु, मुलाको ओइरालो हुने भएकोले नै यो भूगोललाई हेलम्बु भनिएको हुनुपर्छ भन्ने जनश्रुति छ । ह्योल्मोहरुको सघन बस्ती छ यहाँ । ‘ह्योल’ ले हिमालले घेरिएको स्थान र ‘मो’ ले आमायाङ्ग्री अथवा देवीद्वारा रेखदेख गरिएको भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ यो बौद्धमार्गीहरुको विशिष्ट तीर्थस्थल हो भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन ।
तिम्बुबाट प्रवेश गरी तार्केघ्याङ र मेलम्चीघ्याङको सिङ्गै सेरोफेरो हो हेलम्बु । ह्योल्मो संस्कार र संस्कृतिको विश्वविद्यालय हो हेलम्बु । ‘बाँचे एकै डाँडामा, मरे एकै खोलामा’ झैं छ यहाँको आदिमकालदेखिको परम्परा ।
एकादेशको कथा बनेको हेलम्बुको स्याउ त्यहाँ पुगेपछि ‘कुमालेका गाउँमा हाँडीको दुख’ सरि महसुस भयो । हेलम्बुको आँत रसाएर निस्केको जलले घाँटी भिजाउने आशा पालेर बसेका हामी ओरालियौँ सेर्माथाङबाट ।
ओरालिँदा भिरालो जमिनमा फाट्टफुट्ट घरहरू देखिए । कुनै त एकीकृत बस्ती निर्माण परियोजना अन्तर्गत बनेका गाउँ । एकालाप गरिरह्यो मनले– भीरको घर, खोलाको रूख, रणको सिपाही ! यस्तै सोचमा लीन हुँदाहुँदै आइसकेछ तिम्बु ।
थकाइले थिलथिलो भइसकेको थियो पूरै काया काठमाडौँ आइपुग्दा ।
१. फरार प्रतिवादी पक्राउ
२. एकै दिन भारतमा झन्डै चार हजारको मृत्यु, चार लाख १२ हजार संक्रमित
३. कवि तथा समालोचक मालीको निधन
४. कोरियाबाट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई आर्थिक सहयोग
५. शय्या चाहिएमा यी नम्बरमा फोन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
६. कोरोना सङ्क्रमित बोक्न मान्‍दैनन् एम्वुलेन्‍स चालक